Samtec, Inc. ဖြန့်ဖြူး - Micro-Semiconductor.com
P.C. တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် ဘုတ်အဖွဲ့အဆင့် Interconnection ။ Samtec မိုက်ခရိုအစေးဘုတ်အဖွဲ့-to-ဘုတ်အဖွဲ့စနစ်များ (.100 ပေါ်တွင် ",2မီလီမီတာ, .050", 1 မီလီမီတာ, .8 မီလီမီတာ, .635 မီလီမီတာ, .5 မီလီမီတာအပါအဝင်အီလက်ထရောနစ် Interconnection ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်လိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် နှင့် .4 မီလီမီတာအစေး), မြန်နှုန်းမြင့်ထပ်ခိုးစနစ်များ, High-သိပ်သည်းဆသည် array, IC-to-ဘုတ်အဖွဲ့, အနာဂတ်-သက်သေပြချက် / Active ကိုစက္ခုဗေဒ, ကြမ်းတမ်း / ပါဝါစနစ်များနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးအသင်းတော်များ (IDC မှ, discrete ဝါယာကြိုး, တံဆိပ်ခတ် / မြို့ပတ်ရထား, နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်) ။
အဆိုပါ Interconnection မနက်ဖြန်၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကျော်လွန်ပြီးတွေ့ဆုံရန်, Samtec မီတာ 100 ကွာအနေနဲ့ interface ကိုရှင်းလင်းသောသေဆုံးရာမှပြည့်စုံမှုစနစ် optimization သေချာ, စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှစ်ဦးစလုံးသည်ကြောင်းနည်းပညာနှင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်တိုးတက်ထံအပ်နှံနည်းပညာစင်တာများအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, Interconnection အချက်များဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် အကြား၌တည်၏။
နယူးအယ်လ်ဘာနီအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ, ကော်လိုရာဒို, အော်ရီဂွန်, ကော့စတာရီ, တရုတ်, မလေးရှားနှင့်စင်္ကာပူအပါအဝင် 18 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိ 33 တည်နေရာ, နှင့်အတူ, Samtec ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှေ့တော်မှောက်က၎င်း၏ပွိုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနိုင်ပါတယ်။
Samtec 1976 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့, ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပ, နှင့် ISO 9001 နှင့် 5-A1 ဒွန်းနှင့် Bradstreet အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကော်ပိုရေးရှင်းကဒီအရွယ်အစားအဘို့အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြု TS 16949 ဖြစ်ပါတယ်။ Samtec အဆိုပါ connector ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းဆောင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
ဖေါ်ပြချက်: .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8957 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 37722 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6026 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 41248 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: .5MM DOUBLE ROW TERMINAL ASSEMBL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 18491 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: .025" BOARD SPACERS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 81655 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 48707 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: .050" BOARD SPACERS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 13150 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8965 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: BOX CONNECTOR SOCKET STRIP
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 30392 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: .050'' BOARD SPACERS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 53541 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: .025 SQ. TERMINAL STRIPS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 50279 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: .025 BOARD SPACERS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 34507 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 21379 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: .025 SOCKET STRIPS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 27435 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: 2MM TERMINAL STRIP
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8793 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 35481 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 25877 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 13826 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 22304 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 38590 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 33472 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 14468 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 22944 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 14097 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 23152 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: 2MM LOW PROFILE STRIPS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 17590 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 60463 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 34219 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 53330 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 37531 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: .8MM MICRO TERMINAL STRIP
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7262 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 33940 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 26307 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 25361 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 10530 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5904 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: CABLE ASSEM 18POS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 11006 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 13553 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: QFS .635MM STRIPS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5807 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: ELEVATED 2MM SOCKETS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4535 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4969 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: 1MM X 1MM C.L. SURFACE MOUNT BOA
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 12780 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 55987 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 41048 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: 1MM MICRO TERMINAL STRIPS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 20443 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 38355 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 13395 pcs RFQ